Omeo lanja sy avelao hisandratra ny vita malagasy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Betsaka ireo mankany amin’ny fitsaboana malagasy amin’izao fotoana izao. Misy tombontsoa ary ahitana vokatsoa tokoa. Tsapa anefa fa somary atao ambanin-javatra ny fitsaboana malagasy indrindra amin’izao fisian’ny coronavirus izao. Misy ny mahita fanefitra an’io coronavirus io dia ezahana takonana. Isan’ny tena mampalahelo izany. Maninona rehefa misy zavatra vitan’ny Malagasy dia ezahana takonana foana ? Satria ve mahantra ny Firenena ?
Anentanana ny mpitondra malagasy ny hoe avelao hivoaka sy omeo lanja ny vita malagasy mba hisandratra. Manankarena ny Malagasy no sady mahay zavatra. « Manana fanefitra an’io coronavirus io izahay Fitsaboana Malagasy Misandratra na Fimami » hoy Andriatsiferana Théogène filohan’io Fimami io, « ary tsy mahamenatra anay ny miteny izany satria soa ho an’ny Malagasy izany » hoy ihany izy, « ary ny fanomezam-pahasoavana anay ka tsy takonanay satria Andriamanitra no manome anay ny fahalalana.» Tsy misy olombelona mahavita ravinkazo fa Andriamanitra irery no mahavita ravinkazo. Na ireo vahiny miseho mahafehy sy mahay ireo zavatra rehetra ireo ary dia mbola niainga tamin’ny ravinkazo ihany koa. Vahoaka salama no tanjonay, misy amin’ireo olona tonga eto aminay no omenay fanafody fotsiny satria sahirana.
Amin’izao fotoana mampirongatra ny aretina izao dia mahatratra dimampolo eo ho eo no tonga manatona anay hitady fitsaboana. « Nitombo be izany raha ny fijerinay azy ny fahazotoan’olona manatona ny mpitsabo malagasy azy ». Misy amin’ireo olona tonga manatona no marefo toy ny diabetika, sempotra, misy goutte…
Fotoana fanaovana tomban’ny ezaka vita ny fotoana tahaka izao entina hamantarana izay efa vita sy ny tokony ho vita ary izay tokony mbola hatao. Fa ny zavatra hita aloha dia tsy milamina isika fa mifanipaka toy ny valala an-karona, samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ka ny malemy sy ny osa no tavela sy tratra farany eo.